Articles | Myanmar My Always
RAKHINE RIOTS True stripes revealed in Myanmar By Francis Wade CHIANG MAI – The timing of Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi’s return to Europe aftera24-year absence could have been better. She leaves her country amid turmoil … Continue reading →
အကြောင်းတွေ ဆုံတယ် ယမ်းပုံပေါ် မီးကျတယ် ကြေကွဲစရာတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။
Posted on June 7, 2012	by nyuntshwe
“All men tremble at punishment, all men fear death; remembering that thou art like unto them, do not strike or slay.” (The Buddha, The Dhammapada, gahta. 129) တောင်ကုပ်ကိစ္စအတွက် ကျွန်တော်ဟာ ဗုဒ္ဓဝါဒီတစ်ယောက်အနေနဲ့ကော လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ မြန်မာ မူဆလင်တွေကိုကော သေဆုံးသွားကြသူတွေရဲ့ မိသားစုကိုကော တောင်းပန်တယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်ချင်းစာကြည့်တဲ့အခါ သေဆုံးသူများလိုပဲ ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားရတဲ့အတွက် … Continue reading →
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဒီမိုကရေစီကျင့်ထုံးကို လိုက်နာပြပါ”
“သရက်ကင်းကို မှဲ့အောင်အုပ်ရင် မစားလိုက်ရပဲဖြစ်သွားမယ်” မနေ့ကညနေပိုင်းနဲ့ ဒီနေ့မနက်ပိုင်း ပြည်ပရေဒီယိုတွေကနေ ကြားရတဲ့သတင်းကတော့ မဆန်းပေမဲ့ ကြည့်ကောင်းဦးမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်တဲ့ ပါလီမန်အင်အားစုခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းတို့ရဲ့ လက်လှဲပွဲကြီးလို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ သူရဦးရွှေမန်းရဲ့နောက်မှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ အားလုံးမှန်းဆချက်တွေချည်းပါပဲ။ ဟုတ်လဲ ဟုတ်နိုင်တာပဲပေါ့။ ဒါဖြင့် ပြဿနာက ဘာလဲ မိတ်ဆွေတို့ရေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အရွေးကောက်ခံ အဲန်အယ်လ်ဒီတွေက လွှတ်တော်မှာ တကယ်လို့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေကို “ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်” အစား “လေးစားလိုက်နာပါမည်” လို့ ပြောင်းမပေးရင် ကျမ်းသစ္စာမကျိန်ဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဗျာတို့ရေ။ ဆင်မကြီးတော့ အရင်းကျမှတစ်ပြန်ပြီဗျို့။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်တော့ … Continue reading →
Posted on April 10, 2012	by nyuntshwe
“ကယ်တင်ရှင်ကြီး ဂျက်စီဂျိန်းမဟုတ်တန်ရာ” ဒီမနက်ကြားလိုက် မြင်လိုက်ရတဲ့ မင်္ဂလာသတင်းလို့ယူဆရတဲ့သတင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတနံတလျား နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် လူတကာ ရွံကြောက်ကြောက်ခဲ့ရတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့် သာသနာ့ဘောင်ဝင်တဲ့ကိစ္စပါပဲ။ တိုက်ဆိုင်ပုံကတော့ မနေ့တစ်နေ့ကမှ ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်နဲ့လုံခြုံရေးကို သူနဲ့သူ့တပ်ဖွဲ့က ကယ်တင်လိုက်တာဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးအဖြစ် ကြေငြာလိုက်တာ၊ အဲဒီကြေငြာချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ တပ်တွင်းတပ်ပြင်မှာ ဂယက်တွေထလာတဲ့အချိန်နဲ့လဲ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒီအင်တာဗျူးဟာ ဒီပဲယင်းကိစ္စကြီးတစ်ခုလုံးဟာ သူနဲ့မဆိုင်ဘူး။ ဟို စစ်ခေါင်းဆောင်တွေလုပ်တာလို့ ကမ္ဘာသိကြေငြာလိုက်တဲ့ သဘောလဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ မနေ့ကတည်းက ဦးခင်ညွန့်ရဲ့ ရုပ်တုတွေ ထုလုပ်ကြဖို့ … Continue reading →
ဒီနေ့မနက်က မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုတွေကနေတဆင့် ရန်ကုန်မှာ ည (ဒီနေ့မနက်) ၁ နာရီမှာ အီးဂရက်တည် ထောင်သူတစ်ဦးလဲဖြစ် အလဲဗင်းမီဒီယာအုပ်စုရဲ့ အမှုဆောင် အ ရာရှိချုပ် ကိုနေဝင်းမောင် ရန်ကုန်ဆေး ရုံကြီးမှာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန် သွားတယ်လို့ သိလိုက်ရတော့ နည်းနည်းတော့ တုန်လှုပ်မိ ပါတယ်။ ခမြာ အသက် ၅ဝ ပဲ ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ လူပျိုပေါက်စကမှ လူ့လောကရောက်လာ သူ၊ အခုတော့ စောပြီးထွက်သွားရှာပေါ့။ ဗွီအိုအေက ဗဟုအဖွဲ့ဝင် ဦးတင်မောင်သန်းပြောသလို ကျနော် တို့အားလုံးအတွက် … Continue reading →